Iza ny Kindle hovidiana amin'ny 2021? Torolàlana hisafidianana ny maodely ilainao | Vaovao momba ny gadget
Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny boky elektronika dia nanjary fomba fampiasa be indrindra hamakiana ireo boky ankafizintsika, na zava-baovao na kilasika. Ny antony lehibe dia satria ny fampiononana omeny antsika na rehefa mamaky azy ireo na rehefa mividy azy ireo.
Eo amin'ny tsena dia manana fitaovana marobe hamaky boky elektronika isika, antsoina hoe e-mpamaky, na izany aza, ny mpanamboatra izay mitondra ny vokatra tsara indrindra eny an-tsena isan-taona dia Amazon, mpisava lalana amin'ny tontolon'ny boky elektronika. Raha tsy azonao antoka izay modely mety indrindra amin'ny zavatra ilainao, dia hasehonay anao ny fomba fividianana Kindle.
Amin'izao fotoana izao, ny karazany Kindle dia misy fitaovana efatra. Amin'ity faritra ity dia tsy mieritreritra ny halavan'ny Fire isika, ny takelaka ihany koa avy any Amazon izay ahafahantsika mamaky boky elektronika ihany koa, na dia tsy izany aza no tena tanjony, na dia Hiresaka momba izany ihany koa isika noho ny fahaizan'ny zavatra atolotray antsika.
Tetika mahaliana 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Kindle anao
Rehefa nandeha ny taona dia lasa i Amazon fanitarana ny isan'ireo boky elektronika natao ho anay, ary amin'izao fotoana izao isika dia afaka mahita amin'ny maodely fototra toa ny Kindle 2016 mankany amin'ny Kindle Oasis, maodely mankafy ny teknolojia farany amin'ity karazana fitaovana ity.
2 Kindle (2016) taranaka faha-8
5 Fampitahana ireo mpamaky e-Kindle
6 Boky iray tapitrisa mahery no azontsika: Kindle Unlimited
7 Afo mandrehitra ny zavatra hafa rehetra
El mandrehitra vaovao, izay tonga eny an-tsena hisolo ny maodely faha-2016 an'ny 8, dia mampiditra hazavana eo aloha azo ovaina, zavatra tsy ampy amin'ny taranaka teo aloha, ary ahafahantsika mamaky ny toerana sy ny fotoana tiantsika tsy miankina amin'ny hazavana manodidina izay manodidina antsika. Natao hamakiana amin'ny efijery mifanohitra avo lenta izy io tena mitovy amin'ny taratasy vita pirinty ary, toy ny maodely rehetra, dia tsy mampiseho taratra.
6 santimetatra ny efijery, manana tahiry anatiny 4 GB, manana habe 160x113x8,7 mm ary 174 grama ny lanjany, izay ahafahantsika mitazona azy amin'ny tanana iray. 89,99 euro ny vidiny ary hita ihany koa amin'ny fotsy sy mainty.
Kindle (2016) taranaka faha-8
Manolotra antsika ny Kindle a Efijery 6-inch tsy misy jiro miharo, noho izany dia ilaina ny loharano maivana hampiasana azy. Ny efijery, toy ny ankamaroan'ireo fitaovana ireo, dia tsy mandreraka ny mijery azy, malemy paika izy ary tsy mampiseho karazana taratra na dia eo ambanin'ny tara-masoandro aza. Miankina amin'ny fampiasana ataontsika, ny bateria dia afaka maharitra herinandro maromaro amin'ny vola tokana.
Ao amin'ny maodely Kindle (2016) dia misy loko mainty sy fotsy izy io 69,99 euro fotsiny, ary io no fitaovana tsara indrindra hitanao amin'ity faritra ity handinihana ny tombony omen'ny boky elektronika anay, raha mbola tsy azonao antoka fa io no fomba vaovao handaniana atiny.
Ny Kindle Paperwhite no mpamaky e-farany manify indrindra eto Amazon. Ho fanampin'izay, manana efijery izay manome vahaolana 300 pp izy ary, toy ny maodely rehetra, dia tsy ahitana taratra loharano maivana. Ny habaka fitehirizana dia nitarina koa raha oharina amin'ny taranaka teo aloha (8 sy 32 GB) ary miaraka amina fiampangana tokana ananantsika ny fizakan-tena mandritra ny herinandro maro.
Ny iray amin'ireo zava-baovao atolotray antsika raha oharina amin'ireo maodely teo aloha dia ny fanoherana ny rano, mba haintsika ampiasao soa aman-tsara ao anaty kovetabe fandroana, dobo filomanosana na amoron-dranomasina izy noho ny fiarovana azy IPX68. Ny efijery dia manolotra antsika ny jirony manokana, mety tsara ampiasaina amin'ny toe-javatra maivana rehetra.
Ny vidin'ny Kindle Paperwhite miaraka amin'ny tahiry 8 GB misy fifandraisana Wi-Fi dia 129,99 euro, raha ny kinova 32 GB dia mahatratra 159,99 euro. Izahay koa dia manana andiany 32 GB miaraka amin'ny 4G maimaim-poana amin'ny 229,99 euro.
Mividiana Kindle Paperwhite
El Kindle Oasis Hatreto dia ny mpamaky e-Amazon manana ny habeny efijery lehibe indrindra, 7 mirefy manokana. Ny valin'ny efijery dia mahatratra 300 dpi izay manome maranitra izaitsizy ary mamela ihany koa asehoy teny 30% bebe kokoa amin'ity pejy ity ihany.
Tahaka ny Kindle Paperwhite, tsy misy rano izy io noho ny fiarovana IPX68, ny efijery dia tsy mampiseho taratra ary manana jirony manokana hahafahany mamaky tanteraka amin'ny maizina nefa tsy mandreraka ny masonao. Ity no maodely izay manolotra antsika ny zana-kazo kely indrindra, afa-tsy amin'ny ilany ankavanan'ny efijery, izay misy sary lehibe kokoa aseho amin'ny tanana iray.
Ny vidin'ny Kindle Oasis fitehirizana 8 GB misy fifandraisana Wi-Fi dia 249,99 euro, raha ny kinova 32 GB dia mahatratra 279,99 euro. Izahay koa dia manana andiany 32 GB miaraka amin'ny 4G maimaim-poana amin'ny 339,99 euro.
Fampitahana ireo mpamaky e-Kindle
modely New Kindle Kindle Paperwhite Kindle Oasis
vidiny Avy amin'ny EUR 89.99 Avy amin'ny EUR 129.99 Avy amin'ny EUR 249.99
Haben'ny efijery 6 "tsy misy taratra 6 "tsy misy taratra 7 "tsy misy taratra
fahafahana 4 GB 8 na 32 GB 8 na 32 GB
vahaolana 167 ppp 300 ppp 300 ppp
Jiro eo aloha LED 4 LED 5 LED 12
Herinandro fahaleovan-tena Si Si Si
Famolavolana eo aloha tsy misy sisin-tany No Si Si
Fanoherana ny rano IPX8 No Si Si
Sensors amin'ny fanitsiana hazavana mandeha ho azy No No Si
Bokotra fihodinana pejy No No Si
Ny fifandraisana wifi Wifi Ny fifandraisana Wifi na wifi + finday maimaimpoana Ny fifandraisana Wifi na wifi + finday maimaimpoana
lanja Gramin'ny 174 Wifi: 182 grama - wifi + 4G LTE: 191 grama Wifi: 194 grama; wifi + 3G: 194 grama
lafiny X X 160 113 8.7 MG X X 167 116 8.2 MG 159 x 141 x 3.4 - 8.3 mm
Boky iray tapitrisa mahery no azontsika: Kindle Unlimited
Amazon dia tsy mbola fantatra noho ny fiezahany hitady vola amin'ny fitaovana ao aminy. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia mivarotra ny vokatra elektronika amin'ny vidiny izy satria izay tadiaviny dia ny fitazonana ilay mpampiasa ary, amin'ity tranga ity, vidio mivantana eo amin'ny lampihazo ireo boky ireo.
Kindle Unlimited, mametraka eo am-pelatanantsika boky mihoatra ny iray tapitrisa takalony amin'ny sandan'ny 9,99 euro isam-bolana, boky izay azonay atao. Ho fanampin'izay, raha mpampiasa praiminisitra isika dia manana katalaogin'ny boky kely kokoa eo am-pelatananay, fa maimaim-poana tanteraka via Prime Reading.
Afo mandrehitra ny zavatra hafa rehetra
8, Afo mirehitra
Ny fianakaviana Kindle Fire amin'izao fotoana izao dia maodely roa 7-inch sy 8-inch. Natao hanjifa ny atiny multimedia amin'ny alàlan'ny Amazon Prime Video, serivisy horonan-tsarimihetsika Amazon, na dia azontsika ampiasaina aza izy io mivezivezy amin'ny Internet, manatona tambajotra sosialy ary mazava ho azy mba hamakiana ireo boky tiantsika indrindra.
Rariny loatra ny tombony azo, Ka tsy afaka mividy azy ireo amin'ny takelaka avo lenta izay atolotry Samsung sy Apple antsika. Ny vidiny ho an'ny kinova 7-inch dia 69,99 euro ho an'ny kinova 8 GB ary 79,99 euro ho an'ny kinova 16 GB. Ny kinova misy ny haben'ny efijery lehibe indrindra, maodely 8-inch, dia sarany amin'ny 99,99 euro ho an'ny kinova 16 GB sy 119,99 euro ho an'ny kinova 32 GB.
Mividiana afo Kiundle 7-inch Vidio Kindle Fire HD 8-inch
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Amazon » Ahoana no hividianana Kindle
Amazon Kindle miaraka amin'ny hazavana mitambatra, toa tsy afaka nanatsara ny Kindle [ANALYSIS]